Odayaal matalaayay Soomaalida iyo Booranta oo heshiis nabadeed gaaray - Halbeeg News
NANYUKI (HALBEEG)- Odoyaal dhaqameed ka kala socda bulshooyinka Soomaalida iyo Booranta ayaa wada gaaray heshiis nabadeed oo lagu soo afjarayo colaadda u dhexeysay labada dhinac.
Labada beel ayaa waxaa dhexmaray dagaal beeleed gallaaftay nolosha boqolaal qof sidoo kalena barakiciyay kumanaan qoys kuwaa oo la dhacay Waqooyi bari, bariga iyo dhulka xeebaha ee dalka Kenya.
Heshiis nabadeedkan ay garwadeen ka aheyd dowladda Kenya ayaa la rajeynayaa in uu soo afjara dagaalada dibna usoo celiyo wada noolaasho iyo nabad dhex marta bulshooyinka halkaasi ku nool.
Wadahadal labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday hotelka Nanyunki ee magaalada Nanyuki ayaa lagu gaaray heshiis kama dambeys ah.
Kulanka ayaa waxaa ka soo qeyb galay 50 odayaal ergo ah oo ka kala socday labada dhinac waxaana dhexdhexaadinayay maamulada magaalooyinka Isyoolo iyo Gaarisa oo ay kasoo kala jeedaan beelaha dirirtu ay dhex martay.
Wadahadallada ayaa lagu ansixiyay qodobo dhowr ah oo ay kamid yihiin in la sameeyo xabad joojin sidoo kalena la isku celiyo dhammaan xoolihii la kala dhacay.
Duqa magaalada Gaarisa, Joshua Chepchieng oo heshiiska la gaaray dhiggiisa magaalada Isiolo, John Ondego ayaa sheegay in dagaalka uu gallaaftay nolosha 5 qof uuna barakiciyay boqolaal kale sadexdii bilood ee la soo dhaafay oo kaliya.
“Waxaan ku faraxsan ahay in ay heshiiyeen labada bulsho lana soo afjaray colaadda u dhexeysay” ayuu yiri Joshua Chepchieng.
Sida uu idaacadaha Star FM u sheegay Somo Roba oo ah hogaamiye ka tirsan qabiilka Booranta waxaa uu Soomaalida ka codsaday in ay tix geliyaan heshiiska waxa uuna ka dhawaajiyay sida ay uga go’an tahay hirgelinta heshiiskan.